Indawo yeeNdwendwe kwiManor eLiefke Estates - I-Airbnb
Indawo yeeNdwendwe kwiManor eLiefke Estates
Ifama sinombuki zindwendwe onguLoretta
ULuxury Vacation Retreat ezimbini kwi-30 acre Equine Estate enamahashe kwiinduli zaseTennessee. Iindlela zokuhamba. IHorseback Trail Rides ngentlawulo eyongezelelweyo (buza ukufumaneka). I-pool kunye ne-spa (ngoMatshi-Oktobha).
Iimayile ezili-12 ukuya kwi-Historic Downtown Franklin, iimayile ezili-11 ukuya kwi-Historic Leiper's Fork, < iimayile ezi-3 ukuya kwiiFama zase-Allenbrooke, iimayile ezili-11 ukuya eNatchez Trace Parkway, iimayile ezi-2 ukuya kwi-Historic Huff's Grocery, i-35 mins ukuya eNashville Int'l Airport kunye ne-35 mins ukuya edolophini yaseNashville.
Ikhuthazwe luhambo lwethu, indawo yethu yokunethezeka inayo yonke into onokuyifuna okanye oyidingayo ukuze ubalekele kamnandi. Ibekwe kwindawo yabucala yeehektare ezingama-30 i-Equine Estate apho unokuvuka kwaye ube nekofu kwipatio yakho yabucala ngelixa ubukele amahashe ezulazula. Ngaba ufuna ukukhwela umkhondo (umrhumo owongezelelweyo)? Okanye ixesha kunye namahashe? Buza nje kwaye sinokuseta into ethile. Ngeenyanga zikaMatshi ukuya ku-Okthobha uyakwazi ukufikelela kwiqula lethu elingaphandle. Ngaba uyafuna ukuhlala kwi-spa ngobusuku obupholileyo? Sazise kwaye singakuvulela i-spa. Sinendlela ende enokufikelela kwindlela ezolileyo ukuze ibe yindawo entle yokuhambahamba, uhambe okanye ukubaleka. Okanye sebenzisa iindledlana ukuze uhambe uhambo. Kubanda kakhulu ngaphandle? Upholile phambi kweziko legesi kwaye ubukele imuvi. Indawo yeeNdwendwe inombono omangalisayo ojongene nebala lethu lokukhwela isiqingatha seehektare! Ungabukela izifundo kunye noqeqesho ukude kwaye usenemfihlo yakho. Izitali zethu zinendlela yayo yokuqhuba ukuze indawo yethu yokuhlala yabucala kunye neNdawo yeeNdwendwe azibelani ngendlela efanayo.
Zininzi iindawo zamathuba emifanekiso. Buza nje kwaye singakunceda ngaloo nto.
Indawo yeeNdwendwe iqaqambile kwaye inomoya inesilingi eziphakamileyo kwaye uya kuyifumana ipholile kwaye ikhululekile. Impahla entle. Ikhitshi egcwele ngokupheleleyo. Jonga yonke imifanekiso enenkcazelo ngolwazi olungakumbi.
4.98 · Izimvo eziyi-99
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi99
Sihlala kweli lizwe kwinduli yaseTennessee. Kuzolile kwaye kuzolile. I-Huff's General Store ikumgama oziikhilomitha ezi-2 kwaye iyaziwa ngokuba yi-deli sandwiches. Sibekwe kwindawo entle kunye nokufikelela kwi-I-840 (iikhilomitha ezi-2 kude) ekwenza ube naphi na apho ufuna ukuya khona ngokukhawuleza.
Umbuki zindwendwe ngu- Loretta
My husband and I love living in the country and getting away from the chaos. We both love to travel and have stayed in many Airbnb's around the world so we decided we would love to offer a little of what we love to experience while we travel. We hope you enjoy your stay!
I also own a horse stables where we offer trail rides and run a riding academy in addition to the two vacation rental homes.
My husband and I love living in the country and getting away from the chaos. We both love to travel and have stayed in many Airbnb's around the world so we decided we would love to…
Kuba sihlala apha siyafumaneka. Ndihlala ndifumaneka ngefowuni. Ukuba sihamba umgcini wendlu yam uya kufumaneka ukuze akuncede ngayo nantoni na oyifunayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Thompson's Station